कांग्रेस भाेजपुरकाे १ नं इलाकामा काे-काे निर्वाचित भए ? « Deshko News
कांग्रेस भाेजपुरकाे १ नं इलाकामा काे-काे निर्वाचित भए ?
भोजपुर, कार्तिक १४
नेपाली कांग्रेस भोजपुर इलाका नं १ को नयाँ कार्यसमिति चयन भएकाे छ । आगामी पाँच बर्षे कार्यकालको लागि सुभास अधिकारीको सभापतित्वमा २१ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएकाे हाे ।
कार्य समिति चयनका लागि निर्वाचन भएकाे थियाे । नवनिर्बाचित सभापति सुभास अधिकारीले १८ मत प्राप्त गरेका थिए भने उनका प्रतिद्वन्दी उम्मेदवार सुरज राईले १ मत मात्रै प्राप्त गरेका थिए।
कार्यसमितिको उप-सभापतिमा बाबुराम राई र दिनेश रोकाहा, सचिबमा श्रीभक्त राई, सह-सचिबमा बाल कुमार कार्की र साबीत्री गिरी तथा सदस्यहरुमा सगरमाथा राई, दिलिप राई, फुर्लाक्पा शेर्पा, सन्जुराम तामाङ्, पूर्ण बहादुर राई, राम बहादुर राई, हर्क बहादुर बन, नगेन्द्र प्रसाद गिरी, श्रीकुमार राई, रुद्र बहादुर कार्की, सुरज राई, राम बहादुर राई, अगमसिं तामाङ्, शेर बहादुर कार्की र चेतराज अधिकारी चुनिएका छन् ।
दोभाने, खाटाम्मा, चौकीडाँडा र कुलुङ गाबिस समेटिएको १ नं ईलाकामा दोभानेबाट ६ जना मतदाता तोकिएको थियो भने बाँकी गाबिसबाट ५-५ जना मतदाता तोकिएको थियो । २ मत बदर भएको थियाे । चार वटै गाउँ पार्टी समिति सभापति कार्यसमितिको पदेन सदस्य रहने निर्णय पनि भेलाले गरेको छ ।
जाल्पा उच्च माबि चौकीडाँडाको कार्यक्रम हलमा सम्पन्न भेलाका प्रमुख अतिथी महाधिबेशन प्रतिनिधि हरी खतिवडा थिए भने निर्वाचन कार्यक्रम चौकीडाँडा गाउँ पार्टी सभापति रुद्र बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो।